१० बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले १५ सयमै पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेसँगै परीक्षण गर्ने पनि बढेपछि केएमसीले शुक्रबारबाट पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएको हो ।
केएमसीका अध्यक्ष डा. सुनिल शर्माका अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेकाले संकटको अवस्थामा सर्वसाधरणलाई केही राहत पुर्‍याउन पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाइएको हो ।
सरकारले अहिले पीसीआर परीक्षणको अधिकतम शुल्क दुई हजार तोकेको छ । सरकारले तोकेकोभन्दा पाँच सय रुपैयाँ कम शुल्कमै केएमसीले पीसीआर परीक्षण गर्न थालेको हो । यसअघि केएमसीले १ हजार ९ सय ९९ मा पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको थियो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेकाले संकटको अवस्थामा सर्वसाधरणलाई केही राहत पुर्‍याउन पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाइएको केएमसीका अध्यक्ष डा. सुनिल शर्माले जानकारी दिए ।
पूर्वमा प्रतिष्ठित नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा.सुनिल शर्माले गत भदौ महिनाबाट केएमसी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । पीसीआर परीक्षण गरेर छ घण्टामै रिपोर्ट दिइने केएमसीले जनाएको छ ।